भीआइपी सुरक्षा थ्रेट !
काठमाडौं । मुलुकका उराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् हरेक मन्त्रीसमेत चार तहको सुरक्षा घेरामा हिड्छन्। निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी हरदम उनीहरूको सुरक्षा र चुनौतीका सूचनाहरू संकलन गरिरहेका हुन्छन्।
गृहको सुरक्षा चुनौती, बर्गिकरण र परिचालन हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको देखिन्छ। के त्यस्तै हो त ? आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।